Waxaa jira qalab la socoto nidaamka telefoonka si loo hubiyo in ugu fiican ee la qaato user marka loo eego hagaajinta firmware iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in sida ugu dhaqsaha badan loo sii daayo cusub, ama bilaabidda firmware ah la ogaado waxaa mar walba la ogaado by qalab wixii markaas u ogolaataa user ay u maraan habka rakibo. Waxaa kale oo loo yaqaan daayo software rasmi ah oo aan ahayn casriyaynta firmware aan rasmi ahayn oo ROMS ee caadadii taas oo keeni in damaanad ku lida ee telefoonka iyo haddii shil kasta oo ku dhaca marinka ee nidaamka ka dibna telefoonka ku dhintay inta badan kiisaska.
Si loo hubiyo in telefoonka waa la casriyeeyay in sida uga wanaagsan ee suurto gal ah, waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in barnaamijyada software rasmi ah waxaa loo isticmaalaa in arrintan la xiriira. Tutorial Tani waxay keeni doontaa user ee dhinaca barnaamij gaar ah in la soo saaro ay Samsung iyo waxa kale oo la shaqeeya ee gmail, oo ah shirkad ka mid ah taas oo macnaheedu yahay in user ma awoodo in uu u cusbooneysiin gmail kale u noqon doonaa sida barnaamijka aan iyaga lagu ogaan doono oo dhan . Qalabkani waxa uu ayaa loo magacaabay Kies Mini oo waxa uu siiyaa update ah inay telefoonka marka laga reebo habka classic ee Ota.
Waxaa jira faa'iidooyin dhowr ah oo isticmaalaya barnaamijkan oo ah mid ka ugu weyn oo iyaga ka mid ah waa in user ma lumin doonaa damaanad ah ee telefoonka wax alla wixii qalab sida rasmiga ah loo isticmaali doonaa in iftiimiyo telefoonka. Aalad waa inuu xaqiijiyo in habka hagaajinta sii socoto sida isku xigta marna dhamaaneynin iyo user mar walba helo updates ugu fiican sida telefoonka. Tutorial Tani si kastaba ha ahaatee bari doonaa user sida loo isticmaalo barnaamijkan on Mac iyo sidoo kale daaqadaha iyo sawirada la xiriira ka dhigi doonnaa habka fudud ee fulinta.
Sida loo isticmaalo Samsung Kies mini for Windows
Windows waa mid ka mid ah OS ugu badan oo muhiim ah oo loo isticmaalo oo ay inta badan dadka dunida oo dhan. Sidaa darteed waa aad u muhiim ah in la ogaado in nidaamka si ay u isticmaalaan Kies mini daaqadaha waa lama huraan in la xuso sabab u ahaa xaqiiqada ah in haddii aanay ka dibna la sameeyo inta badan ka mid ah dadka isticmaala sii joogi doonaa madmadowga oo aan laga yaabaa in la isticmaalo barnaamijka sidoo waqti si ay dhibaatada la xalin kaas oo la rakibey lagu sameeyey. Waxaa sidoo kale in la xuso in isticmaalka Kies on Windows waa sahlan yahay OS kasta oo kale oo ay u sabab tahay xaqiiqada ah in dadka isticmaala ay Cunid isticmaalaya OS iyo sida ku xusan ka hor intooda badan adeegsanayaa si ay u fuliyaan maalin hawlaha maalintii.
Marka ay timaado in horumarka markaas waxa ay sidoo kale waa mid aad u muhiim ah in la ogaado in ay ku dhiirigelinayaan in daaqadaha jira in ka badan OS kasta oo kale. User ayaa sidoo kale u baahan yahay in la hubiyo in tallaabooyinka ay halkan ku xusan waa in la raacaa waxay ahaayeen kuwo la soo sheegnay iyo amarka waa in aan la bedelay kalifto. Waxaa jira taxadar ahaan isticmaalka Kies mini on OS daaqadaha iyo waa in barnaamijka Samsung barnaamijyada, software iyo xidhaba waa in la saaro ka hor rakibo ee Kies mini si ay u shaqayn karaan sidii baahida iyo dalabaadka isticmaalaha.
Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in barnaamijka la soo bixi tusin ( halkan ) si nidaamka la raaco karaa in sida uga wanaagsan ee suurto gal ah. Waa website-ka rasmiga ah ee Kies Samsung iyo software la heli karo halkan waxaa mar walba la cusbooneysiiyaa shirkadda si user helo jawaabta ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira. Geedi socodka waa sida soo socota:
1. Marka file exe markaas ayaa la soo bixi waa in la double riixi si rakibo bilaabo:
2. Afka markaas waa in la soo xulo user si hannaanka horumarka sida la doonayo:
3. shuruudaha iyo xaaladaha jira markaas in la aqbalo in la hubiyo in shaashada soo socda u muuqataa,
4. xirxiro markaas bilaabi doonaa:
5. computer ayaa markaa waa in la billaabeen sida ugu dhakhsaha badan loo xirxiro ka baxayo:
6. telefoonka ayaa markaas waa in lagugu xiro PC iyo mini Kies waa in la bilaabay:
7. hab USB ayaa markaas waa in la soo xulay telefoonka adiga oo riixaya tab sida hagaajinta Kies firmware magacaabay:
8. Darawallada ayaa lagu rakibi doonaa si toos ah:
9. hagaajinta phone waa ka dibna in la daah furo:
10. shuruudaha iyo xaaladaha ay tahay in mar kale la aqbalo:
11. barnaamijka ayaa hadda bilaabi doona casriyaynta jidadku firmware ah:
12. button ayaa OK tahay in la sii adkeeyey si loo hubiyo in nidaamka la soo gabagabeeyey:
Sida loo isticmaalo mini Kies u Mac
Mac waxa taageeray xoogga Inc Apple iyo sabab la mid ah, waa mid ka mid ah OS adduunka ugu fiican, kaas oo sida ay Apple marnaba helo karaan fayraska iyo arrinta furin. Kies isticmaalka mini on Mac sidoo kale waa mid ka mid ah hababka ugu fudud si loo hubiyo in arrinta users la xalin marka ay timaado firmware hagaajinta.
Ka dib waa hab ah in ay tahay in la raaco arrintan la xiriira in la isticmaalo barnaamijka fudayd iyo qanacsanaanta,
1. Hubi in file zip la soo bixi ( halkan ). Marka waxaa la sameeyaa waa in ay ku yaalaan:
2. sii button waa ka dibna in la adkeeyey,
3. user ayaa markaas u baahan yahay in uu akhriyo shuruudaha iyo xaaladaha iyo EULA ka dibna button soo socda waa in la adkeeyey,
4. user ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in button aad ku heshiisaan la isku soo riixayo,
5. user ayaa mar kale loo baahan yahay in wax miiran sii mar kale:
6. username iyo password ka dibna waa in la galay haddii keentay in:
7. mini Kies laftiisu rakibi doonaa:
8. user ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in folder codsiyada waa la riixi:
9. mini Kies ayaa markaa waa in la riixi mar helay:
10. On telefoonka mobile user ay u baahan tahay in la raaco menu Jidka> codsiyada
11. goobaha USB waa ka dibna in la daah furo:
12. telefoonka waa in lagu rakibaa si cable USB iyo Kies waa in la bilaabay si casriyayn ee la ogaado:
13. shuruudaha iyo xaaladaha ay tahay in la aqbalo,
14. file ayaa binary la soo bixi doonaan,
15. hagaajinta Qalabka wuxuu markaas ku bilaaban doono,
16. button ayaa OK tahay in la sii adkeeyey dhammayn nidaamka.
> Resource > Android > Waxyaabaha ay tahay in aad Ogaato ku saabsan Kies Mini